Gebze Halkalı Marmaray စခန်းများနှင့်ပျံသန်းမှုနာရီ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Gebze Halkalı Marmaray စခန်းများနှင့်ပျံသန်းမှုနာရီ
29 / 06 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
GeBZe annelid marmaray မှတ်တိုင်များနှင့်အချိန်ဇယား
မြေပုံနှင့် Marmaray Gebze Halkalı Marmaray စခန်းများနှင့်ပျံသန်းမှုနာရီ: ဥရောပနှင့် Anatolian ဘေးထွက်ဆက်သွယ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Marmaray စီမံကိန်းကို Halkalı နှင့် Metro နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အားလုံးကိုရပ်နှင့်အချိန် Gebze များ၏ content တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ Halkalı 2019 ဆင်ခြေဖုံး Gebze လိုင်းလိုင်း Marmaray စီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သက်တမ်းတိုးပါဝင်သည်။ ဥရောပဘက်ခြမ်းမှာတည်ရှိပြီး Halkalıက start ကနေ Gebze ရရှိသောရန်။
မြေပုံနှင့် Marmaray Marmaray စခန်းများ
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အရှည်ဆုံးမြေအောက်ရထားလမ်းကြောင်းများကြောင်းအကြီးဆုံးရှိခြင်း Halkalı Gebze အတွက်စုစုပေါင်းမက်ထရိုလိုင်းအတွက် 42 ရပ်တန့်တွင်တည်ရှိသည်။ သူတို့ကို၏ကျန် 14 28 ရပ်နားအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Anatolian ခြမ်းနေစဉ်ဤအရပ်, ထိုဘူတာရုံ၏ဥရောပဘက်ခြမ်း၌တည်ရှိ၏။
Halkalı Gebze မြေအောက်ရထားထဲမှာအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 42 မှတ်တိုင် ဒါဟာတည်ရှိသည်။ Halkalı 115 မိနစ်ဆင်းရပ်တန့်ဖို့ Gebze အကြားစုစုပေါင်းကာလနှင့်အတူ။ အကျဉ်းဖြစ် Halkalı'' လမ်း မှစ. Gebze 115 1 မိနစ်နာရီအတွင်းခရီးသည် 55 မိနစ်နိုင်အောင်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် Marmaray ၏မြေပုံရည်ညွှန်းကိုးကား!
Halkalı Gebze မီထရိုလိုင်းကနေတစ်ဆင့်အများအပြားလွှဲပြောင်းဘူတာတွင်တည်ရှိသည်။ Halkalı - Gebze သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတွေ့နိုင်ပါသည်မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုမြေအောက်ရထားလိုင်းများ (မှတ်တိုင်များ) ၏ထွက်လွှဲပြောင်းလုပ်ပါ။
Gebze Halkalı မြေအောက်ရထားလွှဲပြောင်းရေးစခန်းများ
YenikapıYenikapı-Hacıosman M1-Kirazli နှင့်မြေအောက်ရထားလိုင်းများနှင့်အတူ M2B အတွက်Yenikapıဘူတာ,
GEBZE လက်စွပ်အခကြေးငွေ Tariff
Halkalı Gebze ခရီးသွားလက်မှတ်ရထားရထားလက်မှတ်ဖိုးများနှင့်လေယာဉ်နာရီ 09 / 04 / 2019 Halkalı ဒါကြောင့်ယခုနှစ် 2013 2019 အတွက်ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ကတည်းက Marmaray Gebze ပြီးနောက်လိုင်းပိတ်သိမ်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ 43 ဘူတာရုံပါဝင်သည်ဟု Halkalı Gebze ခရီးသည်ရထားလိုင်းကိုရှည်လျားမိနစ်ခရီးသွားအချိန်နှင့်အတူ 76.6 114 ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ အရာကအကြီးအကျယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနိုင်ငံသားများအသုံးပြု Halkalı Marmaray Gebze လေ့လာရေးခရီးသိချင်စိတ်များ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဘယ်လိုခရီးသည်ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်း? လက်စွပ် Marmaray Gebze Gebze မှတ်တိုင် - Halkalı အဆိုပါ 41 လိုင်းထဲမှာတစ်ဦးစုစုပေါင်းဘူတာရုံရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုင်းလမ်းကြောင်း, HalkalıMustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Yesilkoy, Yesilyurt, Ataköy, Bakırköy, Çankaya, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, အာဗြဟံ, Sogutlucesme, Feneryolu, GöztepeErenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyaliİdealtepeဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ် ...
Marmaray Gebze Halkalı အဆိုပါ 15 မိနစ်တစ်ဦးကအချိန်လိုင်းအတွက် 14 / 03 / 2019 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan, အ Marmaray GebzeHalkalı ဝန်ဆောင်မှု (YHT) ၏စတင်အကြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအဆိုပါ YHT လိုင်း၏အချိန်မှာတစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်သာ "တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီပထမဦးဆုံးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်22, ပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်အတွက် လုပ်. ရပ်တန့်ကပြောသည် Halkalı ဒါဟာဘူတာရုံဖြစ်ခဲ့သည်။ Marmaray GebzeHalkalı အာရှနှင့်အတူ Recep Tayyip အာဒိုဂန်အားဖြင့် "သူ၏အကဲဖြတ်အတွက်သူကဆိုသည်။ ဝန်ကြီး Turhan," 06.00 ဆိတ်ကွယ်ရာမိနစ်န်ဆောင်မှုကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့စတင် 22.00 အလယ်အလတ် 15 မိနစ်နှင့်အတူ 142-06.00 နာရီ 24.00 ရထား, Sogutlucesme-ခုနှစ်တွင် Zeytinburnu လိုင်း 8-144 နာရီအတွင်း။ လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဥရောပ Gebze- အကြားမပြတ်မတောက်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသေချာ MarmarayHalkalı န်ဆောင်မှုနှင့်အတူနာရီဖွင့်လှစ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း ...
Akçarayစခန်းများနှင့်ပျံသန်းမှုနာရီ 20 / 06 / 2017 Akçarayတောင်တက်နာရီနှင့် Stop: အလေ့လာရေးခရီးရဲ့အစမှာစုစုပေါင်းအရေအတွက်က 11 ရဲ့Akçarayလမ်းရထားရပ်တန့်။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက် Seka ပန်းခြံအကြားအကြောင်းကို 14,8 ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်းမှာ Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် Two-လမ်းလမ်းရထားလိုင်းကိုအတွက်အချိန်လုပ်နေတယ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးAkçarayအရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်ရန်အတွက်မြို့ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်။ အလယ်တန်း47 လမ်းကြောင်းတလျှောက်ရပ်နှင့်အဘက်အပါအဝင်စုစုပေါင်း xnumx ရဲ့ရှိပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံAkçarayဗိုလ်ကြီး Yahya Akdeniz Mehmet လီ Pasha ကုန်သွယ်ရေးရင်ပြင်အရှေ့ Barracks အမျိုးသား Will နယူး Fevziye ရပ်တန့်သောကြာနေ့နာရီAkçarayဓါတ်ရထားဘူတာတောင်တက်မြေပုံ Sekapark Akçaray
Havaist တောင်တက်နာရီ Havaist စခန်းများနှင့် Havaist စျေးစီမံကိန်းများကို 21 / 09 / 2019 Havaist Sefer Saatleri, Havaist Durakları ve Havaist Fiyat Tarifeleri. 15. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST, İstanbul Havalimanı’ndan şehir içi geliş-gidiş yönlerinde belirli noktalara transfer işlemi yapmakta. 19 merkezden7gün 24 saat karşılıklı yapılan seferler için, yolcuların 15 dakika önce duraklarında olmaları tavsiye ediliyor Tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak Gayrettepe-Havalimanı ve Halkalı-Havalimanı metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl Gayrettepe-İstanbul Havalimanı'nın öncelikli olarak hizmete alınması hedefleniyor. Kendi aracı ya da taksi haricinde havalimanına gelmek isteyen…
ulaşımparkထံမှ DGS များအတွက်အပိုဆောင်းတောင်တက်ဝန်ဆောင်မှု ''
ထိမိ Bursa ကနေမီးရထားအထွေထွေမန်နေဂျာ၏အလွန်သေးငယ်သောမတ်ေတာရရှိနိုင်